Fahad Yaasiin: "Mahad Salad wuxuu abaabulay in la dilo Ra'iisal Wasaare.." (Akhriso 6 Kiis) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Fahad Yaasiin: "Mahad Salad wuxuu abaabulay in la dilo Ra'iisal Wasaare.." (Akhriso 6 Kiis) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji ayaa ku eedeeyay agaasimaha cusub ee Hay’adda NISA Mahad Maxamed Salaad inuu shaqaale u yahay Alshabaab, kana danbeeyay weerarro agagixiso oo dalka ka dhacay.
“Madaxweyne Xasan Sheekh aqoon uma laha Mahad Salaad, haddii uu si fiican u garan lahaa uma magacaabin NISA” ayuu wareysiga ku yiri Fahad Yaasiin ooi sheegay inuu aad uga naxay markii uu maqlayuin agaasimaha cusub ee NISA loo magacaabay Mahad Salaad.
Wuxu usheegay inuu farriin u diray Madaxweyne Xasan sheegay, ugana digay inuu xilkaasi u magacaabo mahad Salaad, farriintiisna ay gaartay, wuxuu kaloo intaas ku daray in Mahad Salaad uu ku xiran yahay Alshabaab, isla markaana markii la magacaabay Ra’iisal wasaare Rooble ay u sheegeen dadka uu ka mid yahay ee xiriirka la leh Alshabaab.
“Saraakiisha NISA haddii ay la wadagaan Sirta Qaranka Agaasimaha cusub ee NISA Mahad Salaad, wuxuu la mid yahay qof sirtii Qaranka u dhiibay qofkii laga ilaalinayay…” ayuu yiri Agaasimihii hore ee NISA oo qeybtii saddexaad ee wareysiga lala yeeshay la baahiyey maanta.
“Waxaan qiyaasayaa in Madaxwyenaha uu khalad weyn ku galay inuu Mahad Salaad u dhiibo Hay’addahaas oo kale, qofka loo dhiibayo waa in la baaraa… Mahad Salaad dadka Soomaaliyeed dhibaatooyin aad u waaweyn ayuu u geystay, khatar ayuuna ku yahay jiritankooda…” ayuu yiri Fahad yaasiin.
Fahad ayaa sidoo kale Mahad Salaad ku tilmaamay inuu ka mid ahaa dad ay xogtooda hayeen oo mar kasta khataroahoda ka hortegi jireen, isla markaana… dembiyo waweyn ayuu ka galay, isagoo ku dhuumanaya xasaanadii Baarlamaanka.
Falalka Argagxixiso ee Fahad Yaasiin ku eedeeyay inuu abaabulay Mahad Salaad, waxaa ka mida:
1- Inuu baaburta qaraxyada soo geliyo magaalada Muqdisho, kana mid yahay dadka caawiya ee la shaqeeya Alshabaab.
2- Wuxuu isku dayey inuu dilo oo khaarijiyo mid ka mida Ra’iisal Wasaareyaashii dalka soo maray, kaasoo ku fakaday 25 daqiiqo uga badbaadaya in la dilo.
3- Kulan ay lahaayeen labada Aqal Baarlamaanka, kana dhici lahaa Dugsiga Sare ee Booliska, inuu laba gaari oo qaraxypo ay u diyaariyey, kaasoo ay ka hortageen, lana baajiyey. Fahad wuxuu sheegay inuu arrintan kala hadlay Cabdi Xaashi iyo Maxamed Mursal.
4- Inuu Mahad Salaad ka danbeeyay dilka Taliyihii NISA Qooje-yare oo Dhuusamareeb duleedkiisa lagu dilay.
5- Inuu Mahad Salaad ka danbeeyay Qarixii magaalada Gaalkacyo ee lagu dilay Taliye Qooje iyo taliyeyaashii Danab.
6- Inuu abaabulo, iibiyo, kadibna rido Hoobiyeyaasha magaalada lagu weerarro
Eedeynta Fahad Yaasiin ee xilligan soo baxday, kuna socota Mahad Salaad ayaa dad badan yaab ku noqotay, waxaana la filayaa inay dhaliso jawaab celin badan, iyadoo laga sugayo agaasimaha cusub ee NISA inuu iska difaaco eedeymahan.
Previous articleQodobadda Heshiiska ay gaareen Xasan Sheekh iyo Madaxda Maamul Goboleedyada
Next articleWar-murtiyeedkii 7 Qodob ah oo laga soo saaray ShirkII Golaha Wadatashiga Qaran (Akhriso)
Madaxweyne Xasan Sheekh oo magacaabaya Ra’iisal Wasaare iyo Xubnaha Miiska saaran